Sababtii xubinnimada xisbiga Hilimo Qaran looga joojiyay Xildhibaan C/xakiim oo ahaa Xoghayahii Guud? – Kalfadhi
Bishii December ee sannadkii 2019, Guddiga Fulinta ee Xisbiga Himilo Qaran oo kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay in ay ka joojiyeen Xubinnimadii Xisbiga Xildhibaan C/xakiim Macalin Axmed oo ahaa Xoghayahii Guud ee Xisbiga.
Xisbiga Himo Qaran ee uu hoggamiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa khilaafkooda waxaa uu salka ku hayay dhismihii Galmudug.
Xildhibaan C/xakiin oo guddiga uu sheegay in ay ka joojiyeen xubinnimadiisii Xisbiga, ayaa dhankiisa sheegay inuu soo dhoweynayo aqbalaada uu Xisbiga Himilo Qaran ku oggolaaday inuu isaga tago xubinimadii Xisbiga, kaddib markii ay isku aragti ka noqon waayeen arrimo masiiri ah oo ay labada dhinac xalin waayeen.
Waxaa uu yiri xubnaha Xisbiga qaarkood waxaan aad ugu kala aragti duwanaanay isku day ay wadaan siyaasiyiinta qaarkood oo ah in colaado laga huriyo deegaanka aan anigu matalo ee Dhuusamareeb, iyo guud ahaan Galmudug, si fowdadaas looga dhex raadiyo dana siyaasadeed oo aan u arkayay in aysan deegaanka dani ugu jirin.
Mudane C/xakiin, ayaa aaminsan in xisbiga uu ka tirsanyahay iyo dowladnimada ay asal ka tahay deegaanka iyo dadka uu ku metelo Qaranka Soomaaliya. Waxaa uu xusuy in magaaladda Dhuusamareeb uu tegay isaga oo ah xoghayaha guud ee xisbiga Himilo Qaran, kaddiba uu arkay in shaqadda ay xukuumada iyo dowladda ay hayaan ay tahay shaqaddii loo ikmada, halkaasi ay ka bilaababay in uu taageero siiyo xukuumada madaama sidii uu wax u doonayay ay shaqadda u waday xukuumadda.
Waxaa uu carabka ku adkeeyay in shaqadda axzaabta siyaasadda aysan aheyn in la mucaarado kor iyo hoos waxa dowladda ay sameyso. Danaha Qaranka in laga shaqeeyo ayaa dan kasta oo shaqsi iyo xisbi ka weyn.
“Magaalada Dhuusamareeb, ayaa ah deegaan doorashadeyda, maslaxada qofka ku nool deegaanka iyo duruuftiisa ayaan ku qasbanahay in aan raaco. Markii aan imid magaalada ee aan la fariista Ra’iisul Wasaaraha iyo xukuumada, waxaan arkay niyadooda iyo shaqada ay rabaan in ay halkan ka qabaan iyo anniga midii aan rabay in Dhuusamareen laga qabtay ayaa isku mid noqday”, ayuu yiri.
“Taas ayaa isbedel xaga shaqadda ah igu dhalisay oo Galmudug shaqadeeda ah oo si nidaam iyo dowladnimo ay u dhismi laheyd taasina waxaa ay keentay in khilaaf uu soo dhex-gallo xisbiga, anniga iyo saaxiibadeyda kale ee xisbiga in aan isku fahmi weyno qaabkii shaqadda ay halkan uga socotay”
“Anniga waxaan u arkayay in maslaxada deegaanka ay ka horreyso mida xisbiga iyo sidii uu xukunku ku gaari lahaa”.
Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed, ayaa dhinaca kale sheegay in isaga oo jooga magaaladda Dhuusamareeb looga yeeray Mogadishu, kaddibna ay wada shireen isaga iyo madaxda xisbga ayna isla-qaateen in isaga oo ah xoghayaha guud islamarnaa jooga deegaanka shaqadda iyo mas’uuliyada looga dambeeyo, isagana si wanaagsan oo umadda maslaxadeeda iyo danta dalka uu uga soo baxo.
“Shaqadda aan Dhuusamareen ka hayay waxaa ay aheyd shaqo guud oo ah danta deegaanka, si gaar ahan u adeegeysa maslaxada xisbiga, taasina iskuma diidaneyn laakiin waxaan u maleynayaa in madaxdii xisbiga dad kamid ah uma aaney cuntamin qaabkii aan ugu shaqeynayay”.
Qofka awoodi waayay in uu ka tarjumo baahida deegaanada kala duwan ee dalka ma filaayo in uu awoodi karo hoggaaminta guud ee dalka iyo dadka soomaaliyeed, ayuu yiri.
WQ/ Hassan Istiila